के हो त यो ग्रेडिङ सिस्टम??? |
अनुभबहरू>> / प्रस्तुति>> / लेखहरू>> / समाचार तथा जानकारी>> / paudelpadamprasad
Posted on जुन 20, 2016 by Padam Prasad Paudel	टिप्पणी छोड्नुहोस्
हाल एसएलसी रिजल्टको ग्रेडिङ सिस्टम धेरैजसोले बुझेका छैनन्। बुझ्न खोज्नेले पनि गलत गरिकाले बुझेर झुटो प्रचार गरिरहेका छन्। खासमा यो ग्रेडिङ पद्धति के हो? यसको आवश्यकता किन पर्यो? यो ग्रेड पोइन्ट कसरी मापन गरिन्छ? यसरी पाएको ग्रेड पोइन्टलाई कसरी पुरानो तरिकामा बदलेर नम्बर तथा प्रतिशत निकाल्न सकिन्छ?? भन्ने जस्ता कुरा नबुझी यसको ’boutमा गलत अर्थ लगाउनु मुर्खता हो।
Tags: ग्रेडिङ सिस्टम, slc, slc result 2073. Bookmark the permalink.
Previous post ← कपिलबस्तु जिल्लामा पनि हातेमालो साहित्य प्रतिष्ठानको शाखा विस्तार
Next post गजल~इदुलफितर बिशेष →